यो चुनाव पनि एउटा संघर्ष नै हो–उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल Weekly Nepal
यो चुनाव पनि एउटा संघर्ष नै हो–उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल
स्थानीय तहको पहिलो चरणमा भाग नलिएको मधेशवादी दलहरुले यस पटक राजपा बाहेक सबैले भाग लिएर मधेशदेखि पहाडसम्म उत्साह जनक रुपमा सहभागी भएका थिए । मधेशवादी घटक उपेन्द्र यादवको पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले दोस्रो चरणको तीन प्रदेशमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको छ र उसले सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न सफल पनि भएको छ । राजपा गठन भए देखिनै असहमती राख्दै आएका मधेशी दलका शिर्ष नेता विजय कुमार गच्छादार र उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएका कारण स्थानीय निर्वाचन मधेशमा शान्त रहेकोले निर्विवाद रुपमा जनताले मत हाल्न पाएको अनुमान राजनैतिक वृतमा चर्चा चलिरहेको अवस्थामा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
० तपाईहरु स्थानीय निर्वाचनमा जानुभयो तर, जनताहरुले मन पराएनन् जस्तो देखियो नी ?
– जनताले असाध्यै मन पराए जनताले हामीलाई नेपालको चौथो राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गराएका छन । प्रतिकुल परिस्थिति र साधन स्रोतको बिहिनता र अनेक षड््यन्त्रका बाबजुद जनताकै साथ पाएर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौ । जनताले मत नदिएको होइन ।
० तपाईहरु माथि कसले षड्यन्त्र गर्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
– तपाईहरुले देख्नु भएकै होलानी, के छ भन्दाखेरी मधेशमा आन्दोलन भएको थियो, फोरम कै विरुद्वमा । अरु देशमा राज्यका विरुद्व आन्दोलन हुन्छ । नेपालमा हामी सबैले राज्यका विरुद्व आन्दोलन गरेका छौं । यहाँ आन्दोलन नै फोरमका विरुद्वमा, अनि जसरी हुन्छ फोरम हराउ अभियानमा आन्दोलन भयो । मधेश केन्द्रीत चुनाव सकियो, अनि आन्दोलन पनि सकियो, भनेपछि मधेशलाई कमजोर पार्ने, मधेशी जनतालाई अधिकार बिहिन बनाइ राख्ने, अनि अधिकार बिहिन मधेशी जनतामाथि आफ्नो रोटी सेक्ने खालका जुन विकृति विसंगति देखा परेका छन् । एकातर्फ त्योसँग जुददै र अर्कोतर्फ राज्यसत्ताद्वारा सारा बलसैन्य, धन बलदेखि लिएर सशस्त्रबल, अनेकबलहरु यो चुनावमा प्रयोग भई मधेशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैले गर्दा अनेक षड्यन्त्र विरुद्व पनि हामीलाई जुन मत प्राप्त भएको छ । त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ ।
० राजपा नेपालका नेताहरुले उपेन्द्र यादवले मधेशलाई धोका दिनुभयो संविधान संशोधन नगरी चुनावका जानु गल्ती थियो भन्नुहुन्छ नी ?
– प्रतिकुल परिस्थितिमा जनताले साथ नदिएको भए यसरी मसालले गाउँ गाउँ जल्ने थिएन र जुन परिणाम आएको छ प्रतिकुल परिस्थितिका बाबजुत त्यो जनताको साथ पाएर नै यहाँसम्म आएको हो । मेरो वडाको कुरा गर्ने हो भने ८१ प्रतिशत भोट खसेको छ, जहाँ मैले भोट खसाएको थिए यो कुरा नर्बिसनुहोस् । अर्को कुरा के हो भने चुनावमा जानु धोका थियो भने उहाँहरुले नी त धोका नै दिनुभएको होनी उहाँहरुले पनि चुनावमा भाग लिएको हो । चुनाव जितेका पनि छन् स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना तरिकाले भाग लिनु सहि हुने, पार्टीगत रुपमा चुनावमा भाग लिनु चाँही धोका हुने, पार्टी अहिल्यै दर्ता गराउनु हुन्छ । उ बेला कसरी चुनावमा भाग लिने त्यसले गर्दा के अब उहाँहरु चुनावमा आउन लाग्नु भएको होइन् र ?
० तर उनिहरुको कुरा के छ भने संविधान संशोधन नभइ हामी चुनावमा जादैनौं भन्ने छ नी ?
– पहिलो कुरा के छ भने यो संविधानलाई पुनःलेखन नगरीकन संविधानलाई संशोधन नगरीकन देशले संविधान धान्न सक्दैन । त्यो दिशामा हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ । यो चुनाव पनि एउटा सङघर्ष नै हो । हामीले प्राप्त गरेको मत भनेको संविधान संशोधन गराउन कै लागि पाएको मत हो । जनमत संविधान संशोधनको पक्षमा छ । हामी जनताको बिचमा गएका थियौ । जनताको बिचमा गई सकेपछि एउटा परिणाम त आईहाल्छ नी ।
० तर संविधान संशोधनको पक्षमा जनमत छैन भनेर एमालेले भनिसकेको छ नी ?
– तपाई कुन एमालेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले त एमालेले पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भनिसकेको छ । यो संविधानमा विकृति छ, यो संविधान नश्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विपरित छ । त्यसैले यसलाई संशोधन परिमार्जन र पुःनलेखन नगरिकन यो मुलुकलाई गति दिन सकिँदैन भन्ने मेरो ठम्याई हो । पहिले पनि २०१७ सालको संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्न खोजेकै हो, खै त्यो संविधान कहाँ गयो । २०४७ सालको संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्न खोजेका हुन । त्यो संविधान कहाँ हरायो । त्यसकारणले मुलुकमा राजनीति गतिविधि हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु होइन, त्यस्तो भ्रम नपार्दा हुन्छ ।
० आवधिक निर्वाचन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन भएको होइन र ?
– संविधान कार्यान्वयन भयो, सबैले संविधान स्वीका¥यो र यो एकदम यसमा केही पनि गर्न पर्दैन भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अत्यन्त गलत, भ्रामक र यो भ्रममा बाचेको हो भन्नुपर्छ । यो संविधान विभेदकारी छ र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, मधेश विराधी छ र जनजातीको अधिकारलाई कुल्चिएको छ, एकात्मक संघीयताभित्र एकात्मक केन्द्रीकृत र नियन्त्रित चिन्तन प्रणाली हावी भएको छ । त्यसकारण यो संविधानले मुलुकलाई धान्न सक्दैन, यसलाई संशोधन, परिमार्जन र पुर्नलेखन कै माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । मधेशका जनतालाई अहिले प्रदेश नं २ बनाएर र २ नं. प्रदेशलाई अलग गाभ्ने जुन षड्यन्त्र भएको छ यो शासकहरुको मानसिकताको उपज हो । यो काठमाडौंमा शासकहरुको उपनिवेस मानसिकताको नमुना हो भन्न मिल्छ ।
० २ नं. प्रदेशको निर्वाचन असोज २ मा हुँदै छ, जनता चुनावको पक्षमा छन् नी ? के गर्नुहुन्छ तपाई ?
– किन असोज २ मा लगिएको हो, के कारणले पहिलो चरणको चुनाव दोस्रो चरण गर्दै तेस्रो चरणमा गरिन लागेको हो, ती कारणहरु के हुन्, त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने भए गरिसकथ्योनी । यो मधेशीको माग राजपाको मात्रै माग होइन यो कुरा नबिर्सिनुस् । मधेश स्वायत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हस्ताक्षर राज्यले मैसँग गरेको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ स्वायत मधेश प्रदेशको निमार्ण गर्नुपर्छ, त्यो मुद्दा अहिलेसम्म गइसकेको छैन ।
० त्यतिबेला तपाईलेनी हस्ताक्षर त गर्नुभयो बेलाबेलामा तपाई पनि रनभुल्लमा पर्दै आउनु भएको छनी ?
– यो नश्लवादी शासकहरुले धोका दिँदै आएको मधेशलाई, र जनतालाई सधै नै धोकैधोका भइरहेको छ । कहिले मधेश, कहिले जनजाति त कहिले लिम्बुवानलाई धोका दिएको देख्नुहुन्न । बढी मात्रामा मधेशलाई धोका भएको छ । काठमाडौंका नेवारहरुलाई सांस्कृतिक रुपमा अतिक्रमण र आक्रमण गर्दै उनीहरुलाई सिध्याउने प्रयास गरिराखेका छन् । यो नश्लवादी चिन्तनले पश्चिमका जनजातिहरुको अस्तित्व मेटाउन खोजी रहेको छ । कर्णालीका खशहरुको पहिचानलाई मेटाउन कोसिस गरिरहेको छ । यस्ता किसिमका यो नश्लवादी चिन्तनमा आधारित शासन प्रणाली कति दिन टिक्छ ?
० त्यसो भए तपाईले मधेशी जनतालाई धोका दिनुभएको हो ?
– धोका दिएको राज्यले हो, यहाँका कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादीले निर्वाचनमा मधेशी जनता लगायतका आदीवासी, जनजातीहरुलाई धोका दिएका हुन् । तिनका अधिकारलाई उजागर गर्न र चुनावलाई संघर्षका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि हामी अगाडि बढेका हौं ।
० त्यसो भए तपाइहरु राप्रपाको स्थानमा चौथो स्थानमा आउनु भयो होइन त ?
– होइन, स्थान भन्दापनि के हो भने जनताले हामीले उठाएका मुद्दालाई अनुमोदन गरेको देखियो । कांग्रेस, एमाले, सत्तारुढ हुँदै होनी । उसँग सेना छ, पैसा छ, शक्ति छ, प्रशासन छ, शासन छ, सारा चिज भएकै होनी । सरकार जोसुकैको होस् रिजल्ट त अहिले एमाले कै छ नि ।
० तपाइहरु पनि सरकारमा जाने हल्ला आएको छ नि ?
– फन्टुसहरुले लेखेको देखेको छु, मलाई अरु त थाहा छैन ! मेरो बाटो भनेको संघर्षको बाटो हो । चुनावलाई नी मैले संघर्षकै रुपमा लिएको हो । संघर्षलाई छोडेर सरकारमा जाने कुरा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा निर्णय भएको छैन । अब भविष्यमा के–के गर्न सकिन्छ अहिले ठोकुवा त गर्न सकिन्न । हामी संघर्षमा छौं । हामी देशमा उत्पीडनमा परेका जनताको मुक्तिका लागि लडेका छौं । मधेशी, आदीवासी, जनजाती, खस लगायतका जनताका मुक्तिका लागि लडिराखेका छौं र यो लडाइ हाम्रो प्राथमिकता हो । शेरबहादुर होस वा बिरालो बहादुर होस् या कुनै बहादुर होस् । व्यक्तिगत रुपमा किन हिड्नु हुन्छ । यो हाम्रो संघर्षको लडाइ हो ।
० तर तपाइ संघर्षको लडाइ भनिरहँदा निर्वाचनमा पनि जानु भो, भोली सरकारमा गएर पनि संघर्षको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त ?
– हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गरेर लोकतन्त्रिक प्रतिष्ठाहरुलाई समेत संघर्षको माध्यम बनाएर अगाडि बढिरहेको पार्टी हो । हाम्रो पार्टीले निर्णय ग¥यो भने सरकारमा जान सक्छन्, सकिन्छ नी ? तर, हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा जाने कुराको निर्णय गरेको छैन् । हाम्रो पार्टी अहिले पनि संघर्षमा छ, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेको छ । चुनावको माध्यमबाट संघर्षको माध्यमबाट, सदनको माध्यमबाट यो लडाइनै हाम्रो पार्टीको लडाइ हो । सरकारमा जाने आवश्यकता महशुस अहिले मलाई भएको छैन । भविष्यमा तपाईहरु पनि जान सक्नुहोला । तपाईहरु पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुुहोला । भविष्यको कुरा हो । अहिले नै कस्ले भन्न सक्छ र पार्टी बैठक बस्ला निर्णय होला त्यो भविष्यको कुरा होनी ।